Izindawo ezihamba phambili ze-Brunch zeKildare - IntoKildare
Ayikho into efana ne-brunch enhle ngempelasonto.
Ngokungafani nesidlo sasekuseni esisheshayo wena wolf phansi phakathi nesonto, i-brunch yinto okufanele igcinwe nabangane abahle futhi mhlawumbe… ama-mimosa ambalwa.
Siqoqe izindawo ezinhlanu ezinhle kakhulu ze-brunch kule mpelasonto.
IGallops - IKildare House Hotel
Okuthunyelwe okwabiwe nguKildare House Hotel 🌸 (@kildarehousehotel)
Isimo esifudumele nesamukelekayo eThe Gallops yaseKildare House Hotel siyenza ibe yindawo efanelekile yokudla ibhulakufesi lokuphumula
Kutholakala enhliziyweni yedolobha laseKildare, sincoma kakhulu amaqanda abo eFlorentine noma i-Toast yabo emnandi yaseFrance enziwe ngesiraphu ye-maple kanye nebhekoni le-crispy uma uzizwa umnandi kancane.
Okuthunyelwe okwabiwe nguTaim AlFalasi تيم الفلاسي | Sphamandla (@sphamandla)
Ukuthenga sekwedlule isikhathi? Izwa ukudla okumnandi kwesizini eKildare Village, ngemenyu evumelana nakho konke ukunambitheka.
Le yindawo enhle yokujabulela ukudla okumnandi kwase-Itali newayini esimweni sokwamukela, esinobungane.
Eduzane naseKildare Village nasenkabeni yedolobha laseKildare, kungani ungaphumi uphume ube ne-Irish ephelele ye-brunch? AbakwaSilken Thomas abagcini nje ngokuba nemenyu enhle yasekuseni kepha futhi banemenyu yokukhetha enempilo efaka izithelo zezithelo nezitsha zeyogathi, izitsha eziduduzayo zephalishi kanye nama-scones amnandi abhakiwe. Ngabe sikhohliwe ukukhuluma nge-avocado ephihliwe nesinkwa somuncu?
Indawo yokudlela yase-Japanese Gardens
Okuthunyelwe okwabiwe nguNatalie Collins (@japanesegardenscafe)
Itholakala e-Irish National Stud & Gardens, i-Japanese Gardens Restaurant ivulekile kusukela ngo-9 ekuseni futhi iyaziqhenya ngokunikela ngokudla okulula, okunempilo ngokugcizelela ukusha nokunambitheka.
Abagcini ngokudla okumnandi, amakhekhe namakhofi kepha futhi nokudla kwabo kwe-Egg McMuffin edumile. Ulindeni?!
Okuthunyelwe okwabiwe yi-The Brunch Brief (@brunchbrief)
Indawo enhle yanoma isiphi isikhathi.
Ukugcizelelwa eShoda Market Café kusekudleni okuhle okuhle, ikhofi lobuciko nokunikelwa kwewayini okuhlukile. Isitsha sethu esisithandayo kufanele kube ama-pancake anamajikijolo amasha, i-compote yezithelo neNutella.